Noma iliphi igumbi amahle ethokomele unekhono ugqozi kumuntu. Elingcono umhlobiso yemvelo - igumbi izimbali. Baletha endlini umuzwa nokuthula, athobe ukucasuka futhi babekhathele kakhulu.
Indlela obunobunye indawo izimbali
umuntu ongavamile akaphinde asibalele endlini yakhe okungenani oyedwa imbali ebhodweni. Kodwa abatshali wazibonela abazi okuningi ngobuhle kanye iwusizo izitshalo babe ekhaya kusuka amashumi ambalwa amakhulu nezilwane oluhlaza. Nokho, ezindlini ezincane kungaba inkinga nge ukubekwa inombolo enkulu kangaka imibala. Uma izinto ezinkulu ukubukeka obunobunye phansi ke enqwabelanisa amabhodwe ezincane on window Sills akubukeki ngempela aesthetically elimnandi. Ngaphezu kwalokho, akuzona zonke izitshalo ngaleyo ndlela wathola isamba elanele ukukhanya, shading nomunye. Lokhu kungaholela ezifweni ezihlukahlukene ngisho nokufa imibala. omunye Excellent for uphume esimweni esinjalo yokubeka for izimbali. Ngeke nje iskhala eyengeziwe, kodwa ngeke kahle beka zasendlini izitshalo potted ukuze zonke izitshalo wathola umthamo efanayo ukufudumala nokukhanya. Futhi ume izimbali efasiteleni ziwusizo kulabo abafuna ukubeka nezilwane abazifuyile oluhlaza emehlweni. Kungaba kunenzuzo ukuhlela zonke izitshalo ukuze ungangifihleli ngemuva amakhethini, futhi babeyibo emehlweni. Ukwakha focus, sebenzisa imibala egqamile nime. Bakha Ukwakheka enhle, ukudweba amehlo beshiya bahle. Lapho sangemuva elikhanyayo anemibala Kunconywa ukuba ukhethe izimbali oluhlaza yokwamukela.
Hlobo luni izimbali ezibekwa Racks
Ukuze udale ezifuywayo oluhlaza izimo ezivuna ukukhula izimbali, kubalulekile ukuba uzibeke ngendlela yokuthi ukukhanya uwela ngokulinganayo kuzo zonke izitshalo. Ephambi kwezinduna sokumelela ekhethekile nganoma uqimba yayo aphansi ezibekwe zezinhlobo ezinkulu. Duzane kunconywa ukubeka izitshalo ezincane, njenge Chlorophytum, asparagus, Syngonium. Ekugcineni, uchonywe zingafakwa violets, gloxinia.
Lokho zingafakwa emashalofini
Uma kukhona Sills ububanzi zingenziwa noma uthenge esitolo ngesimo ekhethekile yokubeka Shelving amayunithi. Khetha ukuba abe ububanzi efasiteleni. Ngo Racks enjalo ibekwe Igumbi Chrysanthemum, gerbera, gloxinia. Izimbali adala sithathe abancane. Ukuphakama izobalwa ukuze zonke izitshalo wathola ingxenye kudingekile obangelwa ukukhanya nethunzi nomunye.
Kulabo baphupha iqoqo ocebile violets, ngokulinganayo ibekwe emhlabeni sill iwindi, kukhona kubakaki ekhethekile ezimise L-. Lezi kubakaki inamathelisiwe ngqo uzimele iwindi noma nemithambeka. Amashalofu ngoba Racks enjalo ezenziwe ngengilazi. I ukushuba we eshalofini ingilazi kufanele kube amamilimitha angu okungenani ezinhlanu.
Rack kusezandleni zakho
okufana ngasinye imele izimbali, kukhona kokubili pluses kanye minuses. Lapho obeka izitshalo phezu kubakaki kudingeka bayamba izimbobo emithambekeni futhi ozimele. Ngaphezu kwalokho, uma emashalofini yokubeka zenziwa ngengilazi, kufanele acabangele isisindo esikhulu lesi design ngaphambi okunamathiselwe. Futhi emashalofini kokuba sebuningini izibuya izimbali, kwenza kwaba nesidingo amandla. Ngo izimbali ebusika, akhiwe on a sill iwindi, dalula Windings abandayo ngenxa okusalungiswa. A-daylight saving time imibala ezifana violets, kumelwe wenze umthunzi elangeni.
Zonke lezi zinkinga isixazululekile ngandlela: ukukhiqizwa yokubeka kokuba kukhanyiswe yikona, ngezandla zabo. Kulokhu, the yokubeka kungaba indlela ehlukile ngokuphelele. Indaba ikhabethe efanelekayo ubudala, etafuleni eliseceleni kombhede, ifakwe backlighting. Ephambi kwezinduna umcabango, ungenza ngelakho izandla eshalofini kumuzwa ngabanye, ephelele bamba ke ezindaweni eziphakathi nezwe egumbini.
Emashalofini elula nge ukukhanya xaxa
Ebusika kunconywa dosvechivat yimiphi imibala izibani ezikhethekile. Izimbali yokubeka kufanele kukhethwe, eqondiswa izidingo zabo ukukhanyisa: Ukukhanya-loving kakhulu ibekwe phezulu futhi phansi umthunzi-ukubekezela. Uma kukhona Racks, ifakwe izibani ezengeziwe, udinga ukubeka izitshalo ukuze bengakwenzi umthunzi nomunye. Dosvechivat izimbali akudingeki based ngosuku lwabo nokukhanya kudingeka amahora 12 kuya 14. ukukhanyisa yokufakelwa is luvulwe usuku lonke noma ebusuku ukwandisa ubude emini amahora angu-12. elula kakhulu kuleli cala, izikhathi ezikhethekile ukuze uvule bese uvula-off, okuyinto uthenge in okukhethekile ezitolo.
Ngakho, uma kukhona isifiso lokuvuselela, oluhlaza wezangaphakathi, ephelezelwa yokuntuleka isikhala, ukuze ithengwe noma wenza yokubeka izimila. Phakathi ukuma ehlobo kusiza beka izimbali ukuze imbali ngayinye ebhodweni kwaba umthamo ezidingekayo imfudumalo ukunakwa. A yokubeka kungenziwa yenziwe ebusika okukhanyisa ezengeziwe ukuthuthukisa isikhathi emini.
Ukudla "Bathandekayo" izinsuku ezingu-7: imenyu nemiphumela